Realme 5 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Realme X2 Pro ayaa la soo saaray horeba Spain, moodel cusub oo ay sumaddu u gasho suuqa Isbaanishka. In kasta oo aanu ahayn telefoonka keliya ee ay ku galaan gelitaankooda suuqan. Maaddaama ay iyaguna la yimaadaan nooc kale oo xiiso weyn leh, waa maxay Realme 5 Pro. Moodelkani waa mid ka mid ah calanka calaamadaha nooca dhexe.
Dhowr bilood ka hor in Realme 5 Pro si rasmi ah loo soo bandhigay. Ugu dambeyntii waxay ka dhigeysaa soo galitaankeeda suuqa Isbaanishka, sidii looga faallooday dhowr toddobaad. Waxaa loo soo bandhigay sida mid ka mid ah taleefannada ugu xiisaha badan bartamaha on Android maanta.
Sida aan ku aragnay soo bandhigideeda dhowr bilood ka hor, waa ikhtiyaar aad u xiiso badan bartamaha. Ku saabsan naqshadeynta, waxaa ka go'an in darajo u eg dhibic biyo ah, wax dheeraad ah oo oval ah shaashadeeda, taas oo si fiican ugu hoggaansan naqshadda hadda jirta ee aan ku aragno suuqa. Afar kamarad ayaa dhabarka naga sugeysa kiiskan.
1 Tilmaamaha Realme 5 Pro
Tilmaamaha Realme 5 Pro
Realme 5 Pro waa taleefan kujira heerka dhexe ee sumadda Shiinaha. Qeexitaannada wanaagsan ee qaybtaan, oo leh kamaradaha wanaagsan, kuwaas oo ah mid ka mid ah xooggiisa, baytari wanaagsan iyo qaab casri ah. Marka waa taleefan xiiso leh, maadaama ay siiso waxqabad wanaagsan iyo hawlgal, laakiin waxay yeelan doontaa qiimo aad u fudud oo la heli karo, taas oo shaki la’aan ah wax ka caawin doona caannimadiisa. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Shaashad: 6,3-inji IPS LCD leh FullHD + Xallinta 2.340 x 1080 pixels
Processor: Snapdragon 712 oo leh Adreno 616 GPU
Kaydinta gudaha: 64/128 GB
Kaamirada gadaal: 48 MP oo leh aperture f / 1.79 + 8 MP xagal ballaaran oo ballaaran oo leh f / 2.25 + 2 MP macro leh aperture f / 2.4 + 2 MP sawir leh aperture f / 2.4
Batariga: 4.035 Mah oo leh Lacag Deg Deg ah VOOC 3.0
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie oo leh ColorOS 6.0 iyo Hyperboost 2.0
Isku xirnaanta: Dual 4G / Dual Standby, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type C, 3,5mm Jack, FM Radio
Qaar kale: Akhristaha sawirka faraha gadaal, codka Dirac HD
Cabirka: 157 x 74,2 x 8,9 mm
Miisaan: 184 garaam
Waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar wanaagsan oo ah heerka dhexe ee hadda jira. Kaamirooyinka wanaagsan, taas oo ah mid ka mid ah xooggeeda, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dareenka 48 MP. Dareemahan waxaa weheliya 8 MP xagal ballaadhan, 2 MP macro sensor iyo dareeraha saddexaad ee sawirrada, 2 MP sidoo kale. Kaamirada hore ee taleefanka waa 16 MP markan. Dhammaan kaamirooyinka Realme 5 Pro waxay la yimaadaan sirdoon macmal ah, oo loogu talagalay ogaanshaha goobta iyo qaabab sawir dheeri ah.
Dhinaca kale, taleefanka ayaa la imanaya batari awood leh oo ah 4.035 Mah, kaasoo ina siin doona ismaamul wanaagsan oo lagu daro processor-ka lagu dhex isticmaalo. Intaa waxaa dheer, baytarigu wuxuu la yimaadaa amar degdeg ah, taas oo ah muuqaal had iyo jeer xiiso u leh dadka isticmaala. Dareeraha sawirka faraha ayaa kiiskan ku yaal dhabarka taleefanka, sida caadada u ah dhexda dhexe.
Telefoonku wuxuu si rasmi ah u yimaadaa dalkeena. Kuwa xiiseynaya iibsashada Realme 5 Pro ma sugi doonaan waqti dheer. Maaddaama taleefankan laga bilaabay Spain isla Jimcahaas, Oktoobar 18. Hordhac hubaal ah inay dad badani filanayeen, maxaa yeelay waxay ballanqaadaysaa inay noqon doonto meel dhexdhexaad ah oo xiiso leh. Waxay noqon doontaa suurtagal in laga iibsado websaydhka astaanta, iyo sidoo kale dukaamada jirka iyo internetka, sida Amazon, Aliexpress ama PCComponentes, sida lagu dhawaaqay.
Realme 5 Pro waxaa lagu bilaabay laba nooc oo Isbaanish ah. 6/64 GB nooca waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 199 euro. Halka nooca labaad ee taleefanka uu yahay midka leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah, taas oo kiiskeeda ku imaan doonta qiimo dhan 249 euro dukaamada. Qiimo wanaagsan oo loogu talagalay bartamaha aadka u xiisaha badan,
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme 5 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Hulu waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso waxyaabaha aad ka daawan karto internet la'aan